China Phone Anti-kutedzemuka Pad Mat fekitari uye vagadziri | SJJ
Anti-slip pad kana mameti inogona kuchengeta yako nhare mbozha, magirazi ezuva, makiyi uye zvimwe zviri pane yako mota dashboard pasina kutsvedza kana iwe uchityaira. Iwe unogona zvakare kuishandisa mukicheni yako, imba yekugezera uye hofisi kuchengetedza zvinhu zvakamira. Chipo chakakodzera chekusimudzira, premium, kushambadza, chirangaridzo ...
Anti-slip pad kana mameti inogona kuchengeta yako nhare mbozha, magirazi ezuva, makiyi uye zvimwe zviri pane yako mota dashboard pasina kutsvedza kana iwe uchityaira. Iwe unogona zvakare kuishandisa mukicheni yako, imba yekugezera uye hofisi kuchengetedza zvinhu zvakamira. Chipo chakanakira kukwidziridzwa, premium, kushambadzira, chiyeuchidzo, zvishongedzo zvemotokari uye kushongedza. Iyo zvakare inogona kushandiswa senge coaster kana marara pad kumba, hofisi, kana chikoro.
Yakagadzirwa isina-chepfu, isina kunhuwa PU Gel uye yakapfava PVC, haizo deformation uye kutsemuka
Iine simba rakasimba rekubata, anti-slip uye shockproof
Nyore kushandisa, hapana namira kana magineti inodiwa
Reusable, bvisika, washable uye inotakurika
Pashure: Foni Inomira & Kadhi Vabati
Zvadaro: Runhare Rodzosera Bhandi